काठमाडौं, प्रम शेरबहादुर देउवा र नरेन्द्र मोदीवीचको वार्मअप वार्तामा नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र बनाउने सहमति भएको हल्ला चलेको छ । आइतवार राति नेपाल फर्केका प्रम देउवाले यस बारेमा केही पनि बताएनन्, मात्र भ्रमण उपलव्धिपूर्ण भएको धक्कु लगाए । उपलव्धि के के भए भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न सकेनन् ।
यद्यपि देउवा नेपाल आइनपुग्दै भाजपाका नेता सुब्रमण्यम स्वामीले नेपालको आसन्न चुनावपछि नेपाललाई हिन्दुराष्ट्रको मान्यता दिने खुलासा गरेका थिए । प्रवुद्ध समूहका नेता तथा भाजपाका प्रभावशाली सदस्य भगतसिंह कोसियारीले पनि भाजपा नेपाललाई हिन्दुराष्ट्रका रुपमा हेर्न चाहेको खुलासा यसपटक पनि गरेका छन् । उनले दुई प्रधानमन्त्रीका वीचमा हिन्दुराष्ट्र बनाउने विषयमा छलफल भएको बताए ।
यही कुरा प्रम देउवाले किन बोल्न सकेनन् ? किन बताउन चाहेनन् ? उनलाई कसको डर लागेको छ ? यी प्रश्नहरु साह्रै मर्मस्पर्सी छन्, जसको जवाफ भारतीयबाट नेपालीले सुन्नुपर्ने बाध्यता कायम रहिरहेको देखिन्छ ।
तर सरकारपक्ष दङ्ग पर्नुको एउटै खबर छ, भारतले अहिलेसम्म सबैभन्दा ठूलो र स्मरणयोग्य सम्मान नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई दियो रे । नेपाली नेपालको सम्मान खोजिरहेका छन्, सरकारी पक्ष प्रधानमन्त्रीले पाएको व्यक्तिगत सम्मानमा नाक फुलाइरहेको छ । भारतका कारण सीमा मिचिएको, सीमामा गोविन्द गौतमजस्ता युवा मारिएको, नेपाल डुबानमा परेको, हस्तक्षेप नरोकिएको जस्ता राष्ट्रिय स्वाभिमान साँघुरिएको र देउवा संविधान संशोधनका मामिलामा मोदीसमक्ष क्षमाप्रार्थी बन्नपुगेका जस्ता दुर्भाग्यपूर्ण घटना नदेख्ने, देउवाले पाएको देखावटी सम्मानमात्र देख्ने, गजब छ नजरिया ? हामी यसैगरी कहिलेसम्म चिप्लिदै जाने हो ?